Ny Sehatra Fanaovana Blaogy Nizeriana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Septambra 2018 6:19 GMT
Azo marihina amin'ireo ny Timbaland , Trae Days, Chipplas Blog, ny Naija Jams, ny Gazetin'i Kazey. Kayode Muyibi no mpamorona ny toeram-pamondronana ireo bilaogera Nizeriaàn. Manampy ny bilaoginy manokana, namorona sy mitantana ny Nigerian Weblog Ring (NWR) ihany koa i Timbaland. Na izany aza, ny ankamaroan'ireo Nizeriana manao blaogy dia ireo Nizeriana monina any ivelany avokoa.
Azo lazaina fa misy ireo singa maromaro azo ambara ho tomponandraikitra amin'ny antony mahatonga ireo Nizeriana monina ao amin'ny firenena tsy hanoratra blaogy. Ireo tena singa goavana dia mifandray amin'ny tsy fahafahana mahazo sy ny halafon'ny saran'ny fidirana amin'ny Aterineto. Na izany aza, satria efa somary miparitaka ny fampiasana Aterineto, mino aho fa ny tsy fisian'ireo blaogy dia mifamatotra kokoa amin'ny tsy fahafantarana ny atao hoe blaogy raha ampitahaina amin'ny fampiasana ny imailaka malaza sy ny firesahana mivantana eo amin'ny samy mpampiasa. Ary angamba tsy maintsy mila 5 ka hatramin'ny 15 minitra monja ny fijerena ireo imailakao na hiresahana fohifohy amin'ireo namanao, nefa ireo blaogy mila fotoana maro sy fikarohana amin'ny tambajotra, izay lafo kokoa raha jerena ny fidiram-bolan'ireo mpianatra sy ireo tanora manana diplôma izay mpampiasa betsaka indrindra ny Aterineto.
Noho ireo teritery voatanisa eo ambony ireo, ny blaogera Nizeriana tena mavitrika dia ireo Nizeriana teknisiana na ireo tena havanana mikasika ny Web, izay mbola afaka manana tombony amin'ny fijanona ela eo amin'ny Aterineto. Vokatr'izay, tsy gaga ianareo raha mahita blaogy nizeriana miresaka ny teknolojia. Ny antony mitovy dia manazava ny antony mahatonga ireo nizeriana sasantsasany mametraka ireo blaoginy amin'ny anaran-tsehatra amin'ny anarany manokana. Ireo blaogera Nizeriana hafa dia ireo izay monina any ivelany ( Timbuktu Chronicles, Dusky Thoughts izay vao nody ao Nizeria rehefa avy namita Fanompoam-pirenena ho an'ireo tanora nandritra ny herintaona , Black Looks sy ny Soul on Ice) ary tsy miatrika ireo olana toy ny herinaratra miaka-midina sy ny olan'ny telefaona finday tahaka izay iainan'ireo bilaogera nizeriàna azy any an-tanindrazana.